Maorisy dia nametraka 'bubble Resort' 14 ho an'ireo mpizahatany vahiny tafaverina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Maorisy » Maorisy dia nametraka 'bubble Resort' 14 ho an'ireo mpizahatany vahiny tafaverina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny nosy Ranomasimbe Indianina dia hisokatra mandritra ny taona 2021 ary ny dingana voalohany, manomboka ny 15 Jolay ka hatramin'ny 30 septambra 2021, dia ahafahan'ny mpandeha vaksiny mankafy fety fialantsasatra ao amin'ilay nosy.
Ireo mpiala sasatra dia afaka mankafy fotodrafitrasa ao amin'ny hotely nofidiny, anisan'izany ny dobo filomanosana sy ny morontsiraka.
Ireo mpitsangatsangana any Maorisy 18 taona na mihoatra dia tokony hatao vaksiny feno amin'ny Covid-19.
Air Mauritius, Emirates ary seranam-piaramanidina manerantany hafa dia hanampy fahaizan'ny sidina fanampiny manomboka amin'ny 15 Jolay 2021.
Afaka mitsidika ireo mpandeha iraisam-pirenena Maorisy nanomboka ny 15 Jolay 2021, nijanona voalohany tao amin'ny iray amin'ireo "bubble Resort" 14 izay natsangana manokana handray azy ireo any amin'ny nosy.
Ireo mpiala sasatra dia afaka mankafy fotodrafitrasa ao amin'ny hotely nofidiny, anisan'izany ny dobo filomanosana sy ny morontsiraka. Raha mijanona mandritra ny 14 andro ireo vahiny ary manana fitsapana PCR ratsy mandritra ny fijanonany ao amin'ilay toeram-pialantsasatra, dia afaka miala amin'ny hotely izy ireo ary mandeha malalaka momba ilay nosy mandritra ny fotoana sisa ijanonany, mijery ireo toerana manintona maro ao amin'ilay nosy. Na izany aza, ho an'ny fijanonana fohy kokoa dia mety handao ny toeram-pialofana izy ireo ary hody any an-trano.
Nilen Vencadasmy, filohan'ny Fahefana fampiroboroboana ny fizahan-tany any Mauritius dia nilaza fa: "Maorisy dia faly mandray ireo mpitsidika iraisampirenena manomboka ny 15 Jolay 2021 miaraka aminay 14 efitrano fisakafoanana tsy manam-paharoa izay mamela ireo mpitsidika iraisam-pirenena hankafy traikefa azo antoka sy azo antoka. Niara-niasa akaiky tamin'ny trano fandraisam-bahiny, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary mpikirakira fizahan-tany i Maorisy mba hampivelatra sy hanomanana ny foto-kevitry ny bubble Resort mialoha ny fisokafantsika tanteraka amin'ny 1 Oktobra 2021. ”
Ireo mpitsangatsangana any Maorisy 18 taona na mihoatra dia tokony hatao vaksiny feno amin'ny Covid-19. Tsy maintsy mandalo fitsapana PCR izy ireo eo anelanelan'ny 5 sy 7 andro alohan'ny fiaingany ary valiny ratsy no takiana amin'ny fivezivezena mankany amin'ny nosy. Ireo mpitsangatsangana koa dia hanana fitsapana PCR amin'ny fahatongavany ao amin'ny seranam-piaramanidina any Maurice ary amin'ny andro 7 sy 14 amin'ny fialantsasatra fialantsasatra, raha azo atao.
Air Mauritius, Emirates ary seranam-piaramanidina manerantany hafa dia hanampy fahaizan'ny sidina fanampiny manomboka ny 15 Jolay 2021 izay hitombo hatramin'ny alohan'ny fisokafana tanteraka ny 1 Oktobra 2021. Ho an'ny Dingana 2, manomboka ny 1 Oktobra 2021, dia avela hiditra ireo mpandeha vaksiny tsy misy fetra amin'ny fampisehoana fanandramana PCR ratsy natao tao anatin'ny 72 ora talohan'ny niaingany.
Ny fanambarana dia manaraka ny hafainganan'ny fampielezana vaksinina sy ny fandrosoana natao ho an'ny tsimatimanota amin'ny faran'ny volana septambra. Ny mpiasan'ny fizahantany dia natao laharam-pahamehana nandritra ny famoahana ny vaksininy. Io dia nahafahana namerina haingana sy haingana ny indostrian'ny fizahantany Maorisy.
Ny valin'ny firenena manoloana ny areti-mandringana dia anisan'ny iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao satria ny governemanta Maorisiana dia namaly avy hatrany tamin'ny fepetra fanaraha-maso henjana sy ny protokolota. Ny fiarovana ny Maorisianina sy ny mpitsidika dia laharam-pahamehana indrindra hatramin'ny fipoahan'ny Covid-19 ary ny fahombiazana dia vokatry ny ezaka niarahan'ny Governemanta Maorisy sy ny mponina tao amin'ny firenena.
Ireo mpitsidika iraisam-pirenena dia afaka mamandrika ny fialan-tsasatry ny fialantsasatra na amin'ny alàlan'ny mpandraharaha fizahan-tany na mivantana amin'ireo hotely. Hotely 35 fanampiny no nohamafisina ho hotely feno karantina izay hisokatra amin'ny olom-pirenena maorisiana tsy vita fanadinana, ny vady aman-janany rehefa miverina any Maurice. Ity fandaminana ity dia tsy azon'ny mpitsidika iraisam-pirenena tsy vita vaksiny. Ireo vahiny ao amin'ny hotely quarantine feno dia tsy maintsy mameno quarantine 14 andro ao amin'ny efitrano.